Munaasabad lagu xusayey dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH) oo lagu qabtay magaalada Cape-town (DAAWO) - iftineducation.com
Munaasabad lagu xusayey dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH)
iftineducation.com – Munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayey dhalashada Nabi Muxamed (NNKH) ayaa kagu qabtay madarasada Ahlu-sunnah wal-jamaca ee ku taalo magaalada Cape-town,iyadoo munaasabadda ay ka soo qayb galeen culumo caan ka ah dalka Koonfur Afrika, ganacsato, odayaal dhaqameed iyo dhalin yaro aad u tira badnaa.
furitaanka munaasabadda oo lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha Ahlu sunnah wal-jamaca ahna madaxa maamulaha madarasada Ahlu-sunnah Sheekh Xamza Xaaji Cali ayaa si weyn uga sheekeeyey qiimaha ay muslimiinta u leedahay weyneynta dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH) wuxuuna ku dheeraaday muhiimadda ay muslimiinta u leedahay ka sheekeynta dhalashada NAbiga (CSW).
Sidoo kale waxaa isna ka hadlay munaasabadda Sheekh Yaasiin Sheekh Abuukar oo ka sheekeeyey amaanta Nabiga, wuxuuna muslimiinta ku nool caalamka gaar ahaan Soomaalida uu ugu baaqay in laga doonayey inay weyneeyaan xuska dhalashada Nabigeena Muxamed (Naxaris iyo Nabad gelyo Korkiisa Ha ahaatee).
Ganacsade Nuur Shabaab oo ka mid ahaa dadki soo shaqeeyey munaasabaddani ayaa aad ugu mahad celiyey dadki ka soo qayb galay munaasabadda, wuxuuna sheegay in sanadka danbe ay sidan si ka weyn u dhigi doonaan xuska dhalashada Nabiga CSW.
munaasabaddan lagu weyneeynaayey dhalashada Nabiga CSW ayaa ku soo dhamaatay jawi degan,iyadoo dadki ka qayb galayey ay wejiyadoodu ka muuqdeen farxad aad u ballaarn.
Salman Khan oo Filim cusub ku dhigaya South Africa